We Fight We Win. -- " More than Media ": ကားလွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့် ပြုကြောင်း စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီး ပြောဆို
ရေရှည် ကောင်းဖို့ က အရေးကြီးတယ်။ လက်ရှိ ကားဈေးကွက် ရပ်သွားတာ ပြောပလောက်တဲ့ ပြသနာ မဟုတ်ဘူး။ ဈေးကွက်ကောင်းတုန်းက လဲ ကောင်းခဲ့ ကြတာပဲ မဟုတ်လား..။
yap ..i agree above comment ..min may loo ..car say kwat yat tot ..bar lote ya mhar lae
7 May 2012 at 22:30
We don't care about driving/riding fucking luxury cars.
Get the housing prices low.
Low coast housings, Electricity, water, hunger, any thing useful to the people. That really will make every body in the country happy.
ကြိုဆိုရမယ့်သတင်းပါ။ ကားတွေ ပါမစ်ပိတ်ထားတော့လဲခင်ဗျားတို့ ပဲအပြစ်ပြောတယ်။ ဖွင့်ပေးတော့လဲ ပါကင်တွေ လမ်းတွေ အပြစ်ဖို့ တယ်။
ကားဈေးကျသွား၇င် ပြည်သူတွေ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးပို ချောမွေ့ သွားမှာပေါ့။ လူတို င်း ကားမစီးနိုင်သေးပါဘူး။ အလယ်လတ်တန်းစားတွေ ပို စီးနိုင်သွားတာပေါ့။ ဒါကောင်းတဲ့ လက်ခဏာပဲ။ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းသလို ချီးကျူးပါဗျာ။ ၀န်ကြီး က ခုနှစ်တန်းတော့မကဘူးထင်ပါတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ လုပ်ယူသွားရမှာပေါ့။ ဖြစ်လာမှာပါ။ လတ်တလောတော့ နေ့ ချင်းညချင်း လမ်းတွေ က မိုးပျံတံတားတွေ tunnel တွေ ဖြစ်လာဦးမလဲ။ ဘာလုပ်လုပ် ဘုချည့် ထိုင်ဘုနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုးမြင်ဝါဒီဖြစ်သွားမှာသေချာတယ်။
Yeah right!!! Artarloot... good good baloot shoot boot.